जब यी चर्चित सेलिब्रिटीहरुले दोस्रो विवाह गरे
सलमान खानले जब ऐश्वर्यासँग फिल्म खेल्न मानेनन्
बलिउड । बलिउडका दबंग सलमान खानले ऐश्वर्याका कारण फिल्म खेलेका थिएनन् ।
जब यी अभिनेत्रीको रहस्यमय मृत्यु भयो
बलिउडमा कुनै समय यस्तो पनि थियो जब परवीन बाबीलाई फिल्महरुको ओइरो नै लाग्ने गथ्र्यो । तर, उनको मृत्यु भने निकै भयानक थियो ।
प्रेम एउटासँग विवाह अर्कैसँग !
बलिउडमा धेरै यस्ता जोडीहरु रहेका छन् जो एकअर्कालाई वर्षौसम्म डेट गरिरहे तर, अन्तमा उनीहरुले अरुसँगै विवाह गरे ।
कमेडियन कपिल शर्मा टेलिभिजनमा फर्किदै !
पटक पटक विवादमा तानिएका भारतीय कमेडियन कपिल शर्मा पुनः टेलिभिजनमा फिर्ता हुने भएका छन् । डिप्रेसनको सिकार भएका उनी टेलिभिजनमा नदेखिएको धेरै भइसकेको छ ।